Bad-Ka-Soo-Bax Boqor Baa Iska Leh
Australia, 2 Oct 2012 (Alldhooftinle.com)
Shirarkii Bariga Sanaag Maalmahan Uga Socdey Beelo Ka Mid Ah Warsangeliga OO Soo Dhamaaday.
Shirarkii Ardaayada Aadan Siciid iyo Reer Saalax ayaa soo dhamaaday, iyadoo gebi ahaantoodna lagu baahiyey shabakadaha wararka go'aamadii ka soo baxay.
Waxay Labadan Ardaa soo kala saareen go'aanno isku dhow, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen:
a) Inay kalsoonidii kala noqdeen maamul Goboleedka Puntland.
b) Inay cid u dirsadaan Maamulka Soomaliland, si uu u ogolaado.
c) Waxa Beesha Aadan Siciid u dheeraa qodobka ah: Kalsooni kala noqoshada Saldanda Warsengili.
Marxuum Cabdullahi Yuusuf waxa u caddeyd iney kolleyba mar isku dhici doonaan Boqortooyada da'da weyn ee Majeerteenka oo iyadu aaminsan in aan lagu qabsan karin Xukunka Majeerteenka iyo in Bad-Ka-Soo-Bax Boqorku Leeyahay.
Isagoo ka baqaya iney askarta Majeerteenku ku taageeri waayaan la dagaalanka Boqortooyada Majeerteenka ayuu wuxuu go'aansaday siyaasaddiisii ahayd inuu helo askar fara badan oo Warsangeli iyo Dhulbahane ah si uu Boqortooyada Majeerteen ee Cismaan Maxamuud hilfiifaha ugu qaado haddey mini-mini keento.
Wuxuu kaloo askartaa faraha badan u qortay si uu Saldanada Warsangeli ee Garaad Cabdalle u wiiqo si aaney ugu soo gurman Boqortooyada Majeerteenka ee Cismaan Maxamuudka oo tolnimada ka sokow uu xidhiidh iskaashi iyo xiditinimo qoto dheeri ka dhexeeyo.
Siyaasaddaa Marxuum Cabdullahi Yuusuf waxay midha dhashay, waa siduu filayey eh, markey madaxnimada ku qabsadeen Jamac Cali Jamac iyo Cadde Muuse oo metelaya Boqortooyada Majeerteenka.
Siyaasaddaa ayey ahayd tii keentay inuu Jamac Cali Jaamac cagaha wax ka dayo iyo weliba in ciidamadii Cadde Muuse lagu dhabar jebiyo, oo lagu bililiqeysto firdhadkoodii Xero Warsangeli ilaa ay magansadeen Habar-Jeclo iyo Isaaq.
Markii ay meesha ka baxday koolkoolintii uu askarta kolkoolin jirey Marxuum Cabdullahi Yuusuf Axmed ayaa Labadaa Beelood ee Warsangeli iyo qaar kaleba isu arkeen iney ku wiiqmeen guud ahaan siyaasadaha Soomaliya, gaar ahaanna siyaasadaha Puntland iyo loolankii Baarlamaanka Somalida ee dhowaan Muqdisho ka socdey.
Qore, Garaad Axmed Maxamuud Maxamed